WAX-SOO-SAARKA CANABKA AYAA SADDEX LAABMAY - CANAB
Wax-soo-saarka canabka ayaa saddex laabmay
Hadda, celcelis ahaan 100 sentar oo canab ah ayaa laga goostay hal hektar oo ah beerta canabka ah. Xitaa ka hor madax-bannaanida Ukraine, sawirkani wuxuu ahaa 3 jeer ka yar - qiyaas ahaan 30 c / g. Tani waxaa ku xusan Viktor Kostenko, madaxa waaxda horumarinta beeraha, viticulture iyo winemaking ee Waaxda Beeraha ee Wasaaradda Siyaasadda iyo Siyaasadda inta lagu jiro wareysiga mid ka mid ah TV-yada. "Ukriga ah, waxtarka weyn ee waxsoosaarka miraha tayada sare leh, dhulku waa mid si taxadar leh loo xushay, hadda deegaankoodu wuxuu ku siman yahay 45,000 hektar.Xilligan la joogo waxan soo ururineynaa dalagyo badan oo badan sababtoo ah soo saaridda tiknoolajiyada ugu dambeeyay ee beeraha, beeraha tayo sare leh iyo daryeel taxadar leh isaga ka danbeeya. " Sida laga soo xigtay isaga, Ukraine waxaa jira dhul juquraafi ah oo lagu kordhinayo aagga 300,000 hektar oo canab ah. Awooddani waxay leedahay suurtagal ah in lagu caddeeyo, sababtoo ah dalabka tayo sare leh ee adduunka ayaa aad u weyn.
"Qodobkeena muhiimka ah ee laanta sii kordhaya ee khamriga waa horumarinta iyo caawimaadyada soo saarayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, alaabtoodu waxay noqon kartaa mid gaar ah waxayna ka faa'iideysan kartaa baahida weyn ee suuqyada reer galbeedka Waxaan haysannaa wax kasta oo aan u baahanahay inaan galno suuqyo cusub - jawiga saxda ah, , waxaana jira dad si fiican u yaqaan kiiskan, "- ayaa hoosta ka xariiqay Kostenko.
Iyada oo qayb ka ah taageerada dawlad-goboleedka ee 2017, oo u dhiganta UAH 540 bilyan, 75 milyan oo hryvnias ayaa lagu xisaabtamayaa si loo caawiyo beeralayda, beerta iyo beerayaasha rajada. "Waxaan si firfircoon ugu dhiirrigelinnay qorista beerta beeraleyda, sidaas darteed, mid ka mid ah go'aanada culus ayaa ah tirtiridda khidmadda sanadkiiba 500,000 oo UAH ah oo xaq u leh inay iska iibiyaan alaabadooda khamriga ah. Dhinaca kale, way adag tahay in wakhti dheer oo ka mid ah garsooreyaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ay u maraan nidaamka helitaanka ruqsadda muddo dheer, waxaannu hirgelinnay dadaalka lagu xallinayo dhibaatada heerarka sharci-dejinta, "ayuu raaciyay Kostenk. ku saabsan